विप्लव माओवादीको आक्रमणमा तिब्रता : एनसेल पछि वर्ड भिजनको कार्यालयमा ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
विप्लव माओवादीको आक्रमणमा तिब्रता : एनसेल पछि वर्ड भिजनको कार्यालयमा !
नुवाकोट, ३० जेठ । विप्लव माओवादीको आक्रमण तिब्ररुपमा अगाडि बढेको छ ।
एनसेलका टावर ध्वस्त पार्ने रणनीति पछि भूकम्पपछिको प्रतिकार्यका लागि नुवाकोट आएको वर्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालको जिल्ला कार्यालयमा गएराति आगजनी भएको छ । आगजनीको जिम्मा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले लिएको छ ।
गाडीमा करिब ४५ मिनेट आगो लागेपछि मात्रै नियन्त्रणमा लिइएको छिमेकी शिवप्रसाद अधिकारीले बताए । बलिरहेको गाडीको आगोको राप घरको तेस्रो तलामा पुगेपछि उनीहरुले पछाडिको भागमा डोरी लगाएर बलिरहेको गाडी गेटबाट बाहिर पु¥याएका थिए ।
गाडीमा लागेको आगो घरमा सल्किँदा झ्याल तथा घरको बाहिरी भाग जलेको छ । कार्यालयको कागजात र सामग्री सुरक्षित रहेको वर्ड भिजनले जनाएको छ ।
दोस्रो तथा तेस्रो तलामा रहेका मानिसलाई छतमा भ¥याङ राखेर प्रहरी र छिमेकीले अर्को घरको छतमा निकालेर उद्धार गरेका हो । घरधनी कृष्णप्रसाद अधिकारीका अनुसार तल्लो तलामा गाडीबाट आगो घरमा सल्किएपछि माथि रहेका मानिसहरुको एक घन्टापछि मात्रै उद्धार गर्न सकिएको थियो ।
आज बिहान सञ्चारमाध्यमसँग सम्पर्कमा आएका विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी नुवाकोटका एक नेताले उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी आफ्नो पार्टीले लिएको बताए । @ तस्बिर फाइल